အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း -၁၀) - For her Myanmar
အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း -၁၀)
ယမုံသာ မတွေ့ရင် မမေ အသက် အန္တရာယ်ရှိတယ်!!!
ယမုံက ဟန်နီ့ကိုတွဲလာရင်း ဟန်နီဝတ်ထားသော အနွေးအင်္ကျီကို လည်ပင်းနားအထိ ဇစ်ဆွဲပေးလိုက်သည်။ ဟန်နီကတော့ လေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေရသလို အားအင်ချိနဲ့နေသည်။ အိမ်ထဲဝင်သွားသည့်အခါ မာမီက…
“ဟို အန်တီ ဟန်နီက ခေါင်းနည်းနည်းမူးလို့တဲ့ အားနည်းနေတဲ့ပုံပဲ”
“ဟုတ်လားသမီး နေမကောင်းဘူးလား မာမီ့ကိုလည်းမပြောဘူး တော်သေးတာပေါ့ ယမုံတွေ့လို့ တော်ကြာ လမ်းမှာ မူးမေ့လဲနေမှဖြင့်ဒုက္ခ”
“အန်တီ သမီး ဟန်နီ့ကို အခန်းထဲတွဲခေါ်ပေးမယ်နော်”
“အေး အေး သမီး”
မာမီကပါ ဟန်နီ့ကို နောက်တစ်ဖက်က တွဲရင်း အိပ်ခန်းထဲ လိုက်ပို့ပေးသည်။
“သမီး သက်သာလား မာမီ ဆရာဝန် ပင့်လိုက်မယ်နော်”
“အန်တီ ဟန်နီပြနေကျ သမီးတို့လမ်းထဲက ဒေါက်တာကိုပဲခေါ်လိုက်မယ်လေ… သူကနီးတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့”
“အေး အေး အဆင်ပြေသားပဲ”
ယမုံက အခန်းပြင်ထွက်လာပြီး ဒေါက်တာဇွဲသစ်ဆီသို့ ဖုန်းဆက်လိုက်သည်။ တခြားဆရာဝန်ဆိုလျှင် ဟန်နီ့လည်ပင်းက နီမြန်းနေတာကိုမြင်သည်နှင့် မေးခွန်းများမေးလာပြီး ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်သည်။ ဒေါက်တာဇွဲသစ်နှင့်မှ အဆင်ပြေမည်။ ယမုံဖုန်းဆက်ပြီး သိပ်မကြာခင် ဒေါက်တာဇွဲသစ်ရောက်လာသည်။
Related Article >>> အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း -၉)
“မမေ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ မနက်က စကားပြောနေတုန်းကပဲ အကောင်း”
“မူးတယ်လို့ ပြောတာပဲ ဒေါက်တာရယ်”
ယမုံက ဝင်ပြောပေးတုန်း မာမီက ဒေါက်တာ့ကို ဧည့်ခံဖို့သွားပြင်မယ်ဆိုကာ ထွက်သွားသည်။
“တကယ်မူးတာပဲလား မမေ… တခြားဘာဖြစ်သေးလဲ”
ဟန်နီက ဘာမှမပြောဘဲ ငူငူကြီး နေနေသောကြောင့် ယမုံကပဲ ဝင်ပြောရသည်။
“ကျွန်မ သူတို့သမီးရည်းစားနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်နေတဲ့ကြားကနေ ဟန်နီ့ကိုခေါ်လာတာ ဒေါက်တာ သူ့လည်ပင်းမှာ..”
ယမုံစကားမဆုံးခင်တွင်ပင် ဒေါက်တာဇွဲသစ်က ဟန်နီ့လည်ပင်းကို ကြည့်လိုက်သည်။
“မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဒီလိုလုပ်တာ တဆိတ်လွန်လွန်းမနေဘူးလားဗျာ… ယမုံသာ မတွေ့ရင် မမေ အသက် အန္တရာယ်ရှိတယ်… အခုတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး ကျွန်တော် pressure တိုင်းမယ်နော်”
“pressure က ပုံမှန်ရှိရမှာထက် ကျနေတယ်… ရုတ်တရက်ကြောက်စိတ်နဲ့ stress ကြောင့်ပါ စိတ်ပူစရာတော့မရှိဘူး။ မမေကို အားဆေးလေးစွဲသောက်စေချင်တယ်။ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ကလူရော စိတ်ရော ပင်ပန်းတာမလား ပြီးတော့ တခြား relationship ကလည်း ပင်ပန်းစေတော့ လူတောင့်မခံနိုင်မှာ စိုးရိမ်တယ်… အခု ဆေးထိုးပေးမယ် တစ်ခုခုစားပြီး ဆေးသောက်ပေါ့”
“ကြွလာပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါက်တာရယ် အန်တီ့သမီးလေးက အဲ့ဒီလိုပဲ နေမကောင်းတာလဲမပြောဘူး”
“ရပါတယ် အန်တီ မမေနဲ့က ခင်နေပြီးသားပဲ အခု သူ့ကိုတစ်ခုခုကျွေးပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆေးတိုက်ခဲ့ချင်တယ်”
“ရပါတယ် အန်တီ ခေါက်ဆွဲ ပြုတ်ထားတယ်… ဒေါက်တာ့အတွက်လည်း မုန့်နဲ့ကော်ဖီစီစဉ်ထားပြီးသားပါ သုံးဆောင်ပါဦး”
ဟန်နီ့မာမီနဲ့ ဒေါက်တာဇွဲသစ် အခန်းပြင်ထွက်သွားမှ ယမုံက ဟန်နီ့နားကို ပြေးကပ်သွားသည်။
“ဟဲ့ ဟန်နီ အဆင်ပြေရဲ့လား”
“ငါအခု ဘာမှမပြောချင်သေးဘူး ယမုံရယ် ငါအရမ်းပင်ပန်းနေတယ်”
“အေးပါ နင်ပြောချင်မှပြော… အခုတော့ ဆေးသောက်ဖို့အတွက် တစ်ခုခု အရင်စားရမယ် မာမီ ခေါက်ဆွဲပြုတ်ထားတာ ငါသွားယူခဲ့မယ်”
Related Article >>> အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း – ၈)
ယမုံခွံ့ပေးတဲ့ ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားပြီးတော့ ဇွဲသစ်တိုက်တဲ့ ဆေး သောက်ကာ ဟန်နီနှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။
အိပ်ရာမှ နိုးလာတော့ ဟန်နီ့ဘေးတွင် ယမုံရှိနေသေးသည်။
“ဟန်နီ နိုးပြီလား သက်သာလား”
“တော်သေးတာပေါ့ နင်အကြာကြီးအိပ်ပျော်နေလို့ ဒေါက်တာက စိတ်ပူနေတာ။ သူ ဆေးရုံတောင် မသွားတော့ဘဲ နင့်ကိုတစ်ချိန်လုံးထိုင်စောင့်နေတာ။ ခုနကမှ meeting ရှိတယ်ဆိုပြီး ဖုန်းလာလို့ စိတ်မချဖြစ်နေတဲ့ကြားက ပြန်သွားတာ”
“ရှိတယ်… နင့်အတွက် ညနေစာသွားချက်နေတယ်… ဧကသု နင့်ဖုန်းကို ဆက်တိုက်ခေါ်နေလို့ ငါပိတ်ထားလိုက်တယ်။ နင်တို့ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ ငါ့ကိုပြောပြလို့ရပြီလား”
“အင်း ဝရံတာထွက်ရအောင်ဟာ… အခန်းထဲမှာနေရတာ အသက်ရှူကြပ်တယ်”
ယမုံနှင့် ဟန်နီတို့ ဝရံတာဘက်ကို ထွက်လာခဲ့သည်။
“ဒါနဲ့ နင်ကရော… ဘယ်လိုလုပ် ငါ့ဆီကို ရောက်လာတာလဲ”
“နောက်နှစ်ရက်နေရင် ကလောမှာ MTV နှစ်ခုနဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ဖို့ ခရီးထွက်ရမယ်ဆိုတာ နင့်ကိုလာပြောတာ ဒီမနက်ပဲ ဒါရိုက်တာကဆက်သွယ်လို့”
“သြော် တော်သေးတာပေါ့ မဟုတ်ရင် ငါသေနေလောက်ပြီ”
ဟန်နီကဖြစ်ခဲ့သည့်အကြောင်းများကို ယမုံကိုပြောပြလိုက်သည်။ ယမုံက ဟန်နီပြောသောစကားများကို မယုံနိုင်သလို ကြည့်နေသည်။
“သေချာတယ်ဟန်နီ သူက စိတ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လူပဲဖြစ်ရမယ် ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကို စွပ်စွဲပြီး နင့်ကို နာကျင်အောင်လုပ်တာ ငါတရားစွဲပစ်မယ်”
“တော်ပါပြီ ယမုံရယ် ငါသူ့ကိုအရမ်းကြောက်နေပြီ သူ့ကိုချစ်တာကသပ်သပ်၊ ကြောက်တာကသပ်သပ်ပဲ။ အရင်တစ်ခေါက်လို ချစ်တဲ့စိတ်က ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဖုံးမသွားနိုင်တော့ဘူး။ နင်သာရောက်မလာရင် သူငါ့ကိုအသေသတ်မှာ သိလား”
ဟန်နီကပြောရင်း မျက်ရည်ကျလာသောကြောင့် ယမုံက ဟန်နီ့ကို ပွေ့ဖက်ပေးထားလိုက်သည်။
“နင်သူ့ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်ပါတော့ဟာ… ဒီရက်ပိုင်းနင့်နားမှာ ငါ အမြဲရှိနေမယ်သိလား နင်ဘာမှ မကြောက်နဲ့… ပြီးတော့ ဒေါက်တာဇွဲသစ်ကလည်း နင့်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးမှာပါ… သူက နင့်ကို အရမ်းစိတ်မချဖြစ်နေတာ… နင် ခံစားနေရတာသိပေမဲ့ ငါဒီစကားကို ပြောရဦးမယ် နင့်ဘဝအတွက် အသင့်တော်ဆုံးသူက ဒေါက်တာဇွဲသစ်ပါ ဟန်နီရယ်… သူနင့်ကို စိတ်ဝင်စားနေတာ နင်လည်းသိမှာပါ။ မသိဘူးဆိုရင်လည်း အဲ့ဒါ ဧကသုအပေါ်မှာ သစ္စာရှိနေချင်တဲ့ နင့်စိတ်ကြောင့်ပါ။ အခုဝေးဝေးကိုမကြည့်နဲ့တော့ နင်နဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ဒေါက်တာဇွဲသစ်ကို စဉ်းစားကြည့်”
“ယမုံရယ် ငါ ကိုနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ချင်တော့သလို ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မစဉ်းစားချင်သေးပါဘူးဟာ.. ငါ့စိတ်ကို ခဏတာ အနားပေးလိုက်ချင်သေးတယ်”
“အေးပါ အေးပါ ငါနားလည်ပါတယ်…”
ယမုံက ဟန်နီ့ကိုနောက်တစ်ကြိမ် တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးဖက်ပြီး ကျောကုန်းလေးကိုပုတ်ကာ အားပေးလိုက်သည်။
ခြံဝကနေလှမ်းကြည့်နေသော ဒေါက်တာဇွဲသစ်သည် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်၏ ကြည်နူးစရာအချိန်လေးကို မနှောင့်ယှက် ချင်သောကြောင့် အိမ်ထဲမဝင်တော့ဘဲ လှည့်ပြန်လာခဲ့လေသည်။ မမေရယ်… မမေ နေကောင်းသွားတယ်ဆိုတာနဲ့တင် ကျွန်တော့်မှာ စိတ်အေးရပါပြီ။ မမေ ဘဝလေး အေးချမ်းဖို့တော့ ကျွန်တော် ကြိုးစားကြည့်ချင်ပေမဲ့…
ယမုံသာ မတှရေ့ငျ မမေ အသကျ အန်တရာယျရှိတယျ!!!
ယမုံက ဟနျနီ့ကိုတှဲလာရငျး ဟနျနီဝတျထားသော အနှေးအင်ျကြီကို လညျပငျးနားအထိ ဇဈဆှဲပေးလိုကျသညျ။ ဟနျနီကတော့ လပေျေါမှာ လမျးလြှောကျနရေသလို အားအငျခြိနဲ့နသေညျ။ အိမျထဲဝငျသှားသညျ့အခါ မာမီက…
“ဟို အနျတီ ဟနျနီက ခေါငျးနညျးနညျးမူးလို့တဲ့ အားနညျးနတေဲ့ပုံပဲ”
“ဟုတျလားသမီး နမေကောငျးဘူးလား မာမီ့ကိုလညျးမပွောဘူး တျောသေးတာပေါ့ ယမုံတှလေို့ တျောကွာ လမျးမှာ မူးမလေဲ့နမှေဖွငျ့ဒုက်ခ”
“အနျတီ သမီး ဟနျနီ့ကို အခနျးထဲတှဲချေါပေးမယျနျော”
“အေး အေး သမီး”
မာမီကပါ ဟနျနီ့ကို နောကျတဈဖကျက တှဲရငျး အိပျခနျးထဲ လိုကျပို့ပေးသညျ။
“သမီး သကျသာလား မာမီ ဆရာဝနျ ပငျ့လိုကျမယျနျော”
“အနျတီ ဟနျနီပွနကြေ သမီးတို့လမျးထဲက ဒေါကျတာကိုပဲချေါလိုကျမယျလေ… သူကနီးတော့ အဆငျပွတောပေါ့”
“အေး အေး အဆငျပွသေားပဲ”
ယမုံက အခနျးပွငျထှကျလာပွီး ဒေါကျတာဇှဲသဈဆီသို့ ဖုနျးဆကျလိုကျသညျ။ တခွားဆရာဝနျဆိုလြှငျ ဟနျနီ့လညျပငျးက နီမွနျးနတောကိုမွငျသညျနှငျ့ မေးခှနျးမြားမေးလာပွီး ရှုပျထှေးသှားနိုငျသညျ။ ဒေါကျတာဇှဲသဈနှငျ့မှ အဆငျပွမေညျ။ ယမုံဖုနျးဆကျပွီး သိပျမကွာခငျ ဒေါကျတာဇှဲသဈရောကျလာသညျ။
Related Article >>> အခဈြ၏ အမှောငျဘကျခွမျး (အပိုငျး -၉)
“မမေ ဘယျလိုဖွဈတာလဲ မနကျက စကားပွောနတေုနျးကပဲ အကောငျး”
“မူးတယျလို့ ပွောတာပဲ ဒေါကျတာရယျ”
ယမုံက ဝငျပွောပေးတုနျး မာမီက ဒေါကျတာ့ကို ဧညျ့ခံဖို့သှားပွငျမယျဆိုကာ ထှကျသှားသညျ။
“တကယျမူးတာပဲလား မမေ… တခွားဘာဖွဈသေးလဲ”
ဟနျနီက ဘာမှမပွောဘဲ ငူငူကွီး နနေသေောကွောငျ့ ယမုံကပဲ ဝငျပွောရသညျ။
“ကြှနျမ သူတို့သမီးရညျးစားနှဈယောကျ ရနျဖွဈနတေဲ့ကွားကနေ ဟနျနီ့ကိုချေါလာတာ ဒေါကျတာ သူ့လညျပငျးမှာ..”
ယမုံစကားမဆုံးခငျတှငျပငျ ဒေါကျတာဇှဲသဈက ဟနျနီ့လညျပငျးကို ကွညျ့လိုကျသညျ။
“မိနျးကလေးတဈယောကျကို ဒီလိုလုပျတာ တဆိတျလှနျလှနျးမနဘေူးလားဗြာ… ယမုံသာ မတှရေ့ငျ မမေ အသကျ အန်တရာယျရှိတယျ… အခုတော့ ဘာမှမဖွဈဘူး ကြှနျတျော pressure တိုငျးမယျနျော”
“pressure က ပုံမှနျရှိရမှာထကျ ကနြတေယျ… ရုတျတရကျကွောကျစိတျနဲ့ stress ကွောငျ့ပါ စိတျပူစရာတော့မရှိဘူး။ မမကေို အားဆေးလေးစှဲသောကျစခေငျြတယျ။ လုပျရတဲ့ အလုပျကလူရော စိတျရော ပငျပနျးတာမလား ပွီးတော့ တခွား relationship ကလညျး ပငျပနျးစတေော့ လူတောငျ့မခံနိုငျမှာ စိုးရိမျတယျ… အခု ဆေးထိုးပေးမယျ တဈခုခုစားပွီး ဆေးသောကျပေါ့”
“ကွှလာပေးတာ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဒေါကျတာရယျ အနျတီ့သမီးလေးက အဲ့ဒီလိုပဲ နမေကောငျးတာလဲမပွောဘူး”
“ရပါတယျ အနျတီ မမနေဲ့က ခငျနပွေီးသားပဲ အခု သူ့ကိုတဈခုခုကြှေးပွီး ကြှနျတျောကိုယျတိုငျဆေးတိုကျခဲ့ခငျြတယျ”
“ရပါတယျ အနျတီ ခေါကျဆှဲ ပွုတျထားတယျ… ဒေါကျတာ့အတှကျလညျး မုနျ့နဲ့ကျောဖီစီစဉျထားပွီးသားပါ သုံးဆောငျပါဦး”
ဟနျနီ့မာမီနဲ့ ဒေါကျတာဇှဲသဈ အခနျးပွငျထှကျသှားမှ ယမုံက ဟနျနီ့နားကို ပွေးကပျသှားသညျ။
“ဟဲ့ ဟနျနီ အဆငျပွရေဲ့လား”
“ငါအခု ဘာမှမပွောခငျြသေးဘူး ယမုံရယျ ငါအရမျးပငျပနျးနတေယျ”
“အေးပါ နငျပွောခငျြမှပွော… အခုတော့ ဆေးသောကျဖို့အတှကျ တဈခုခု အရငျစားရမယျ မာမီ ခေါကျဆှဲပွုတျထားတာ ငါသှားယူခဲ့မယျ”
Related Article >>> အခဈြ၏ အမှောငျဘကျခွမျး (အပိုငျး – ၈)
ယမုံခှံ့ပေးတဲ့ ခေါကျဆှဲပွုတျစားပွီးတော့ ဇှဲသဈတိုကျတဲ့ ဆေး သောကျကာ ဟနျနီနှဈခွိုကျစှာအိပျပြျောသှားခဲ့သညျ။
အိပျရာမှ နိုးလာတော့ ဟနျနီ့ဘေးတှငျ ယမုံရှိနသေေးသညျ။
“ဟနျနီ နိုးပွီလား သကျသာလား”
“တျောသေးတာပေါ့ နငျအကွာကွီးအိပျပြျောနလေို့ ဒေါကျတာက စိတျပူနတော။ သူ ဆေးရုံတောငျ မသှားတော့ဘဲ နငျ့ကိုတဈခြိနျလုံးထိုငျစောငျ့နတော။ ခုနကမှ meeting ရှိတယျဆိုပွီး ဖုနျးလာလို့ စိတျမခဖြွဈနတေဲ့ကွားက ပွနျသှားတာ”
“ရှိတယျ… နငျ့အတှကျ ညနစောသှားခကျြနတေယျ… ဧကသု နငျ့ဖုနျးကို ဆကျတိုကျချေါနလေို့ ငါပိတျထားလိုကျတယျ။ နငျတို့ဘာဖွဈခဲ့တာလဲ ငါ့ကိုပွောပွလို့ရပွီလား”
“အငျး ဝရံတာထှကျရအောငျဟာ… အခနျးထဲမှာနရေတာ အသကျရှူကွပျတယျ”
ယမုံနှငျ့ ဟနျနီတို့ ဝရံတာဘကျကို ထှကျလာခဲ့သညျ။
“ဒါနဲ့ နငျကရော… ဘယျလိုလုပျ ငါ့ဆီကို ရောကျလာတာလဲ”
“နောကျနှဈရကျနရေငျ ကလောမှာ MTV နှဈခုနဲ့ ကွျောငွာရိုကျဖို့ ခရီးထှကျရမယျဆိုတာ နငျ့ကိုလာပွောတာ ဒီမနကျပဲ ဒါရိုကျတာကဆကျသှယျလို့”
“သွျော တျောသေးတာပေါ့ မဟုတျရငျ ငါသနေလေောကျပွီ”
ဟနျနီကဖွဈခဲ့သညျ့အကွောငျးမြားကို ယမုံကိုပွောပွလိုကျသညျ။ ယမုံက ဟနျနီပွောသောစကားမြားကို မယုံနိုငျသလို ကွညျ့နသေညျ။
“သခြောတယျဟနျနီ သူက စိတျပုံမှနျမဟုတျတဲ့လူပဲဖွဈရမယျ ဘာမဟုတျတဲ့ကိစ်စကို စှပျစှဲပွီး နငျ့ကို နာကငျြအောငျလုပျတာ ငါတရားစှဲပဈမယျ”
“တျောပါပွီ ယမုံရယျ ငါသူ့ကိုအရမျးကွောကျနပွေီ သူ့ကိုခဈြတာကသပျသပျ၊ ကွောကျတာကသပျသပျပဲ။ အရငျတဈခေါကျလို ခဈြတဲ့စိတျက ကွောကျတဲ့စိတျကိုဖုံးမသှားနိုငျတော့ဘူး။ နငျသာရောကျမလာရငျ သူငါ့ကိုအသသေတျမှာ သိလား”
ဟနျနီကပွောရငျး မကျြရညျကလြာသောကွောငျ့ ယမုံက ဟနျနီ့ကို ပှဖေ့ကျပေးထားလိုကျသညျ။
“နငျသူ့ကိုအဆကျအသှယျဖွတျလိုကျပါတော့ဟာ… ဒီရကျပိုငျးနငျ့နားမှာ ငါ အမွဲရှိနမေယျသိလား နငျဘာမှ မကွောကျနဲ့… ပွီးတော့ ဒေါကျတာဇှဲသဈကလညျး နငျ့ကိုစောငျ့ရှောကျပေးမှာပါ… သူက နငျ့ကို အရမျးစိတျမခဖြွဈနတော… နငျ ခံစားနရေတာသိပမေဲ့ ငါဒီစကားကို ပွောရဦးမယျ နငျ့ဘဝအတှကျ အသငျ့တျောဆုံးသူက ဒေါကျတာဇှဲသဈပါ ဟနျနီရယျ… သူနငျ့ကို စိတျဝငျစားနတော နငျလညျးသိမှာပါ။ မသိဘူးဆိုရငျလညျး အဲ့ဒါ ဧကသုအပျေါမှာ သစ်စာရှိနခေငျြတဲ့ နငျ့စိတျကွောငျ့ပါ။ အခုဝေးဝေးကိုမကွညျ့နဲ့တော့ နငျနဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ဒေါကျတာဇှဲသဈကို စဉျးစားကွညျ့”
“ယမုံရယျ ငါ ကိုနဲ့အဆကျအသှယျမလုပျခငျြတော့သလို ဘယျသူ့ကိုမှလညျး မစဉျးစားခငျြသေးပါဘူးဟာ.. ငါ့စိတျကို ခဏတာ အနားပေးလိုကျခငျြသေးတယျ”
“အေးပါ အေးပါ ငါနားလညျပါတယျ…”
ယမုံက ဟနျနီ့ကိုနောကျတဈကွိမျ တငျးတငျးကွပျကွပျလေးဖကျပွီး ကြောကုနျးလေးကိုပုတျကာ အားပေးလိုကျသညျ။
ခွံဝကနလှေမျးကွညျ့နသေော ဒေါကျတာဇှဲသဈသညျ သူငယျခငျြးနှဈယောကျ၏ ကွညျနူးစရာအခြိနျလေးကို မနှောငျ့ယှကျ ခငျြသောကွောငျ့ အိမျထဲမဝငျတော့ဘဲ လှညျ့ပွနျလာခဲ့လသေညျ။ မမရေယျ… မမေ နကေောငျးသှားတယျဆိုတာနဲ့တငျ ကြှနျတေျာ့မှာ စိတျအေးရပါပွီ။ မမေ ဘဝလေး အေးခမျြးဖို့တော့ ကြှနျတျော ကွိုးစားကွညျ့ခငျြပမေဲ့…
Tags: Afraid, childhood, Fiction Series, Fun, love, psychology, Scare
ညဘက်တွေမှာ ဘာလို့ ခေါင်း ခဏခဏ ကိုက်ရတာလဲ?
For Her Myanmar May 13, 2019